Ukwelashwa ukuqunjelwa umzimba wayekwenza isikhathi eside. Kufanele kuqashelwe ukuthi ukuvivinya umzimba njalo angeke nje ukuqeda lokhu akujabulisi, kodwa futhi kakhulu ngcono emathunjini.
Yini umzimba kukhona ephumelela kunazo for ukuqunjelwa? Yilokhu sizokutshela ngezansi. Uyofunda mayelana nokuthi kungani zikhona nobunzima nge bethulula futhi kanjani they azibonakali.
Ngaphambi kokuba umsebenzi ukuqunjelwa, kufanele ungitshele ukuthi yini lesi simo.
Kwezokwelapha, ukuqunjelwa libizwa imisiwe, ukungabi ehlelekile noma nobunzima sokuzikhulula. UBANI izingxenye inkinga yilesi sifo. Nakuba gastroenterologists iningi lithi ukuqunjelwa - lokhu akusona isifo kodwa nje uphawu.
Kungani kukhona ukuqunjelwa (umzimba for ukuthuthwa kwabantu ngenxa yengozi zizonikezwa ngezansi)? Izimbangela esesimweni esinjalo kukhona ezihlukahlukene. Okuvame kakhulu zalezi zinhlobo zihlanganisa lokhu okulandelayo:
ekudleni (isb, ukusetshenziswa kwemikhiqizo ocacile licubunguliwe lemali obanele of isitshalo Imicu yotshani);
yokuntuleka evamile / isigqi evamile yokuphila futhi ezifweni ukuze ukucindezeleka;
ukuphila umzimba (kufaka ekhatsi kutfutfuka kwemfundzi yokujama tsi e ukhalo);
isifo ovamile (umgogodla intambo isifo, umdlavuza colon, isifo sikashukela, hemorrhoids, letindzala isifo sokuhlasela kwamasosha omzimba, ukulimala ingquza namathumbu);
ukuhlukumezwa kwezidakamizwa, kuhlanganise laxatives.
Imbangela ukuqunjelwa ngezikhathi ezithile kungukuphula indlela yabo yokuphila evamile (isibonelo, ngenkathi kuhanjwa).
Avamile umsebenzi ukuqunjelwa zivumele iziguli ukuba balahle lezi zimpawu ezingemnandi, njenge:
umzamo kwemisipha ngesikhathi sokuzikhulula;
ukuvuvukala kanye ukusinda esiswini;
indle ezomile kakhulu futhi obukhulu (kuhlanganise ngesimo ubuhlalu);
umuzwa bethulula akuphelele wamathumbu.
Kufanele kuphawulwe ukuthi ukuqunjelwa okungamahlalakhona ngokuvamile ukubonisa izimpawu dyspepsia, isilungulela noma kunalokho, ukungakuthandi ukudla, isicanucanu, ukubuyisa futhi ubuhlungu besisu.
Ngokuhamba njalo isimo sokugembula kungenzeka ukudakwa. Ngenxa yalokhu, isimo lesiguli liwohloka kakhulu. Kubonakala thuthuva ukukhathala, ukucasuka, ukucobeka, izinhlungu zekhanda, futhi ubuthongo.
Yini umzimba ukusiza nge ukuqunjelwa? Okokuqala, odokotela batusa kulesetayelekile wamathumbu umsebenzi ngokusebenzisa ukubhucunga. ukusebenza njalo lezo zinqubo zizosheshisa basishiye.
Kuyinto efiselekayo ukwenza massage ekuseni ngaphandle ukuvuka embhedeni. Okokuqala sidinga ukuba afeze imivimbo 10, bezihlikihla futhi nomkhombe ngesikhathi inkaba e ukunyakaza isiyingi ngokuqinile ngokwewashi. Ngemva kwalokho ufuna agobe amadolo nomlenze wesokunene, bese ucindezela ukuze isisu sakhe, ubambe kule wombuso imizuzwana embalwa. Lokhu kulandelwa kancane ukuvuka embhedeni, ukugqoka lokuqala phansi nomlenze wesokunene.
Ukuze ukuqaliswa enye indlela kufanele massage ithawula ofakwe amanzi abandayo, abese ke unqobe kakhulu. Han indwangu ngakwesokunene, kufanele zihanjiswe kusukela esiswini maqondana onqenqemeni engezansi (ohlangothini lwesokudla) futhi emuva ngo izikhathi 5-9. Ngemva kwalokho, inqubo efanayo kumele kwenziwe nge esandleni sobunxele.
Uma wenza lezi zinyathelo ezilula nsuku zonke, imiphumela uqiniseka ukujabulisa.
umzimba elula ukuqunjelwa
Ukuze sibe abafundisi abaphumelelayo kakhulu ngemva massage isiguli Kunconywa ukwenza izivivinyo ezilandelayo. Kufanele ngiphuze ingilazi egcwele amanzi (gulps) emazingeni okushisa okuvamile. Ngemva ihora ¼ senze 10 Hlala-ups, bese ahlale phezu haunches yakhe amasekhondi 17, lase ngesineke yokwelula izinyawo zakho bese poprisedat izikhathi 4-5 futhi.
umzimba okunjalo ukukhuthaza okusheshayo bethulula esiswini. Uma kwenzeka ukuthi lokhu akwenzeki, udinga baphuze 2-3 izingilazi zamanzi. Ukuphuza ngamunye wabo, ukwenza squats.
Layisha esimweni ukuma
Ukwelashwa ukuqunjelwa umsebenzi othandwa kakhulu phakathi kwalabo abangakwazi ukusebenzisa laxatives.
Ngakho, ukwenza amathumbu akho asebenze, sinikeza amanani alandelayo:
Uqondanisa izinyawo zakho ehlombe-ububanzi ngaphandle futhi izandla zakho phezu ibhande, sitsheke umzimba, bese ukuncika phambili, ukwakha engela kwesokudla, futhi futhi, waqonda. Lo msebenzi izitimela imisipha lumbar futhi oyenza isebenze ikholoni.
Ukuncika emuva emdulini, izinyawo zakho ehlombe-ububanzi ngaphandle, izandla ekhanda lakhe somknite. Ukudonsa umoya kakhulu, zama eniqhubeka nimkhiphela isisu kakhulu futhi exhaling - ahoxise ke. Lokhu umthwalo izitimela diaphragm kanye ukuphefumula besisu, kuthuthukisa motility emathunjini kwegazi we komgodi ongaphakathi kwamathumbu. By the way, Donsa njalo sikhuthaze ukusikwa izindonga ipheshana wokugaya ukudla.
Ufaka izandla phezu ibhande, futhi izinyawo zakho ehlombe-ububanzi ngaphandle, kancane bend kwesokunxele kuqala bese kwesokudla.
Thatha elilandelayo yokuqala - izinyawo kufanele ibekwe kancane ebanzi kuka ububanzi ehlombe. Kancane sizenqabe umzimba emuva ngokushesha ukuncika phambili. Ngesikhathi esifanayo, bazama ukufinyelela izandla zakho phansi. Le ndlela uqeqesha izicubu imisipha ngemuva, okuyinto ngokwazisa bayoba nesandla ekwakheni outflow kangcono igazi emithambo yegazi kusukela ipheshana wokugaya ukudla.
Izandla chaza esandleni, bese uqondanisa izinyawo zakhe ehlombe-ububanzi ngaphandle. Ukwenza phambili egoba, kungazifinyeleli iminwe ezinyaweni okuphambene. La makilasi abe kunomthelela oqonde ngqo motility we-colon.
Yima ngezinyawo ehlombe-ububanzi ngaphandle futhi izandla zakho ngaphandle. Ngakwelinye ihlangothi, ukushintshanisa esifubeni kwesokunene nezinhlanu kwesobunxele. Lo msebenzi normalizes peristalsis emathunjini.
Ukuze enze ukuthi ukuzikhandla ngokomzimba ezifana, uzodinga esihlalweni ephethe emuva:
Ehlezi esihlalweni, futhi babuyela ohlangothini lwayo, goba phambili, qondanisa ngangokunokwenzeka, bese inqamula izandla zakho phezu ngemuva ekhanda. Khona-ke kancane ukuncika emuva. Ekuqaleni, ukwenza lokhu umsebenzi onzima ngempela. Ngakho-ke, kufanele unamathele ngesandla esisodwa ngemuva emuva, namathafa, nemithambeka kumele kwenziwe nge amplitude amancane. Ngenxa yalokho lezi amaseshini uzokwazi ukuqinisa esiswini, emhlane, kanye ngcono kwegazi we ipheshana wokugaya ukudla.
Sihlezi Phezu emaphethelweni esihlalweni, ukuncika phambili futhi sizame ukufinyelela iminwe yakho ukuze izinyawo. Ukubuyela indawo yokuqala, agobe umlenze owodwa ngesikhathi nedolo ukuyona zezandla zakhe, bese ucindezela esiswini. Yenza lesi sivivinyo nezinye emlenzeni. ukunyakaza okunjalo massaged kahle amathumbu bese ukukhuthaza ukudedelwa amagesi.
Bonisa kusuka ukuqunjelwa ekukhulelweni
Kuyinto imfihlo ukuthi abesifazane abaningi bahlushwa ukuqunjelwa ngesikhathi sokukhulelwa. Ukuqeda kulesi simo, sincoma ukuthi ukwenza izivivinyo ezilandelayo:
Standing ngamadolo futhi emuva ngqo, kufanele ngobumnene goba, emahlombe slumping. Ukubuyela isikhundla kokuqala, kubalulekile ukuba ibuyele ukhalo emuva. Izenzo ezinjalo kufanele kwenziwe izikhathi ezingu-15.
Endaweni efanayo (ngayo yomine imilenze) kudingeka sengidonsa umoya kanye esiphezulu ukuqoqa emuva yakho, cindezela kwesilevu sakho esifubeni sakho. Exhaling, agobe emgogodleni kufanele kube, futhi uzolisusa ikhanda lakho njengoba eliphezulu ngangokunokwenzeka.
Ngamadolo wakho, kancane zize zithonye emuva naphambili. Okulandelayo, udinga twirl okhalweni lwakhe kuya kwesokunxele bese kwesokudla.
Kufanele kuqashelwe ukuthi izifundo ezinjalo uvumele abantu besifazane abangangeni kuphela ukuba athululele wamathumbu, kodwa futhi akhulule izitho ezifana izinso.
Cholecystitis olunamandla: ukunakekelwa okwengeziwe esikhathini prehospital
Hygroma ibhulashi kanye nokwelashwa yayo
Indlela yokwenza izandla zeKhisimusi ngezandla zakho? Indlela yokwenza inkanyezi kaKhisimusi kanye nengelosi ekhaya